U Gabara Deegaan Dhan!!! Qeybtii 2-aad Waxaa Qoray Burhaan Burhaan - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > U Gabara Deegaan Dhan!!! Qeybtii 2-aad Waxaa Qoray Burhaan Burhaan
January 4, 2018 January 4, 2018 admin1015
“Aniga ima garanaysid Muno aa la i dhahaa, adeerkaa Cali baan si fiican isku kaseynaa. Barre aan la dhashay nooh.”
“Waan ku gartay, gabadha dheere cad miyaad tahay, ooy dadku yiraahdaan way qurxoontahay” ayuu Cali ku kaftamay.
“Maxaa! Adiga ma aaminsanid miyaa in aan qurxoonahay?” ayeey Muno su’aashay iyadoo hoos iska leh, wiilku kibir badanaa?
“Ma aaminsani kuma dhihin, in dadku saas yiraahdaan baan kuu sheegay kaliya, anna dadka baan ka mid ahay, waliba ugu horeeyaa” ayuu Yuusuf isku difaacay.
“Xariif in aad tahay Barre ayaa iisoo sheegay” ayeey tiri iyadoo qosol markaan ku dhufatay.
Yuusuf, oo la yaaban sida sahlan ooy sheekadu isugu duba dhacday, baa Muna u sheegay, “waligeey qof aanan si fiican isku aqoon intaan oo dhan lama hadlin, masha Allah gabar furfuran baad tahay”.
Sheeko gaaban baa dhexmartay Muna iyo Yuusuf hadana aad u furfuran, aad buu ula dhacay bashaashnimadeeda, markaasuu adeerkiis ku yiri “adeer Caliyow Munada Barre la dhalatay caadi maaha sheekaaleey waaye”. “Soo naag maahan? naag oo dhan baa markay wax damacsantahay furfurane!” Ayuu adeer Cali ku dhaliilay. Yuusuf oo la yaaban baa adeerkiis ku yiri “adeeroow maxaad horta wax kasta uga shakisaa?”
Yuusuf, sida caadada u ahayd xaafadda Xamar jadiid, oo ardada isku fasalka ay yihiin intooda badan ay daganyihiin buu isku sii daayay markii Jimce la gaaray. Wuxuu u socdaa saaxiibkiis Ciise Timajilic ooy ku ballameen in ay badda Liido isku raacaan. Runtuse waxay tahay, in uu is leeyahay intaad Xamar Jadiid joogtid, armaad gabadhii habeen dhaweyd kusoo wacday ee Barre la dhalatay aad iska soo hor baxdaan. Xaafadda Xamar Jadiid markuu gaaray, Ciise oo dagan tukaanka Barre sokadiisa toos uma aadine, tukaankii Barre buu usii gudbay.
Markiiba waa ka shallaayay, sababtoo ah, Yuusuf, si wanaagsan oo gabar aad ka heshay lagu qaabilo uma labisneyne, macawuus dhamaad ah, uu is lahaa badda haddii lagu soo xado dhib malahan, iyo buume duq ah, oo aad u dheer, oo hoos ka muuqda, markuu macawuusta soo xeyto buu sitaa. Funaanad dhamaad dartiis xabadkiisa looga jeedo ayuu xiranyahay. Waxa uu gashanyahay oo dhan dacaska ayaa ugu cusub, iyaguna shan kun oo shillin Soomaali ah kaliya ayeey joogaan, oo wax nin weyn magaalo ku aado ma ahan.
Yuusuf oo is leh, kala fiiree, yeeysan Muno dharkaan dulufka ah kugu arkine, baa waxaa indhaha ku dhuftay Barre oo tulaankiisa hortiisa nin alaab usoo xamaalay lacag ku siinaya, oo kusoo dhaweeyay, “weey, war saaxiibkeey Yuusuf ahaa!” isagoo dhiniciisa usoo dhaqaaqay, labada gacmoodna u fidiyay si uu hab usiiyo.
Yuusuf ayaa la soo booday, isagoo is leh armuu Barre sheeko cusub kuula yimaadaa ood ku ag daahdaa! “Barrow saaxiib, ii waran seetahay?” oo isagoon Barre jawaab ka sugin sii watay, “Saaxiib, maanta Ciise Timajilic baan balansanayn, oo badda ayaan u soconnaa, isagaa hadeer i sugaya, oon ka baqayaa in uu i dhirirsado”, iskuna dayay in uu baxo. Barre oo iska dhigaya qof culeys ka dhacay ayaa yiri, “war nasiib baan leeyahay, in aan hadeer qaado baan rabay, Ciise Timajilic dabagaabkii uu ku dabaalan lahaa baan u hayaaye, sug aan tukaanka kasoo bixiyee, aad usii geyside”.
Yuusuf oo tukaankii Barre hor taagan, oo si u kadiidaysan, oo is leh Allow Muna hakaa horkeenin adoo sidaan u eg, bay Muno luuq tukaanka ku dhaganaa, oo gurigooda ka yimaada kasoo baxday, iyadoo danbiil weynan badan oo faaruqa sidata.
Yuusuf Muno hadda ka hor wuu arkay laakiin si fiican uma xauusto. Maantase waxaad moodaa, Muno in ay si gooni ah u qurux badantahay. Isagoo wuxuu sheego garan la’, maadaama iyadu aysan aqoonna is leh, ka aamus haku ag martee, ayuu Barre soo baxay, isagoo dhar bac ku jira walfinaya, oo markuu Muno u jeeday wajigiisii badalay sida qof wax qashqashaadi raba “Yuusuf, hoo saaxiib, waa kanaa dharkii”. Munana inta ku jeestay ku yiri, “Munooy, wiilkaan waxaa la yiraah, Yuusuf, Cali ayaa adeer u ah”.
Muno ayaa inta hadalkii daftay tiri “Yuusuf miyaa? waan garanayaa, habeen dhawayd baan is barannay” Barre baa inta hadalkii sii dafay, yiri “Yuusuf xaflad buu rabaa in uu galabta aado, marka dhar qurxoon buu iga soo raadsaday, illeen dulufkaas uu sito, xaflad laguma aadi karee!”.
Yuusuf inta ceeb la jiriricooday buu yiri, abaayo waa beentiis, dharkaan Ciise Timajilic baa iska leh, oo ku dabaalan raba. Badda ayaan u soconnaa oon dharkaan dulufka usoo qaatay, si a…” markuu intaas marsiinayo buu Barre hadalkii boobay uu yiri, “Caadi waaye saaxiib in dhar lakala amaahdo, ee maxaad beenta isugu difaacaysaa?” oo isagoo warkii sii wata yiri, “Kabana mid saaxiibkay ah, baan kaaga soo baryayaa ee aan Muno tukaanka uuga sii tagtee wax yar i sug”
Yuusuf oo ciil meel uu is geeyo garan waysan, bay Muno soo dhex gashay oo tiri, “Yuusuf, ninkaan warkiisa iska dhaaf, waan ogahay in uu kugu camiranaayo, waa iska kaftan badanyahay” Yuusuf inkasta ooy hadalkaas neef kaga soo go’day, hadana wali wuu ka xumaa in isagoon labisnayn ay Muno aragto. “Muno, haye abaayo barasho wanaagsan mar labaad, Ciisaa i sugaya oon usii cararayaa, waa inoo mar kale”, ayuu Yuusuf Muno u sheegay isagoo ceeb darteed wajigeeda fiirin la’, Isla markiina bartiiro la dhigay wax socod iyo orod la isku daray u eg. isagoo hoos ka ganuunacayana yiri, “wallaahi billaahi, hadda ka dib, haddaan badda aadaayo xataa waan soo labisanaa, wixii la xadaayo, hala xado. Barrooow in aan kaa aarsado baa igu ballan ah adna.”
Isagoon dhag laqabta aanan lahayn, ayuu gurgiii Ciise Timajilic dalakh yiri. Deydka guriga Ciise, waxaa jooga Ciise hooyadii , maamo Istaahil oo weeseysanaysa, oo markay aragtay ninka isi soo makhiiyaya, si halhaleel ah maryaheedii ka kala daadsanaa isugu duwatay, iyo Ciise walaashiis Shamso, oo meeshii ay saaka canjeelada ku dubtay wali fadhisa, weelkii cajiinkana dhaqaysa, biyihii ay ku biyaraacisana inta hoosteeda ku daadisay la moodo in ay caano meesha uga daateen, oo iyana markay wiilka guriga dalakh soo yiri u jeeday hadallo habaar iyo cay isugu jira isku dartay.
Shamso garbasaar ma aysan sidan, oo timaheeda oonan hagaagsanayn, sidii ay hurdada uga soo kacdayna ah, lana moodo dibile bal sida baa u bannaanaa. Dirac baati ah oo xabadka ka jeexanna waa xirneyd, oo horraadadeeda ibtooda maahane intooda kale looga jeedo. Lugaheeda midabka maariinka casaanka xiga ah waa u banaanaayeen oo diracceeda oo xeydxeydnaa baa dhabteeda ugu aruursanaa, wajigeedana cajiin firdhad ah baa ka cadcaddaa.
Shamso si gooni ah bay u naxday waayo Yuusuf aad bay uga heshaa, in ay la hadashana waa ka xishootaa. Yuusuf waa wiil midab furan, dhirir dhexdhexaad ah leh, jir ciyaartooy oo dhissan leh, tima galgaloolan, oo markii la arkaba in uu galabkaas soo xiirxiirtay la moodo leh. Yuusuf waa wiil farxad iyo dhoolacadays joogta ah lagu yaqaanno. Foori iyo hees luuq macaan buu markii la arkaba dhexda kaga jiraa. Suugaanta Soomaalida, gaar ahaan, heesaha aad ayuu u xiiseeyaa una kala yaqaan. Heestii la isku qabsadaba, asxaabtiisu isaga ayeey ula yimaadaan. Astaamahaas dartood bay gabdho badan ku riyoodaan in ay Yuusuf xiriir la samaystaan, Yuusufse, Muno ka hor qof uu ka helay wali ma uusan arag
Markii uu gudbay bay shamso ka shallaysay hadalladii ay daldaleysay intuu Yuusuf guriga dhex marayay. Waxay ka baqday in uu Yuusuf u maleeyo in ay qof fududtahay. Yuusufse guriga deedkiisa in dad fadhiyeen iyo in ari daaqayay makala aqoon. Aad buu u cirmarsanaa.
Yuusuf isagoo sida caadada u ahayd qolka Ciise aanan garaacin buu dalakh yiri. Ciise Timajilac oo dareemay in ay wax qaldanyihiin baa sariirtiisii uu ku fadhiyay inta ka istaagay weydiiyay, “war saaxiib, xaalku waa see? Nabadi ma jirtaa?” Yuusufna inta Ciise dabamareeyay oo sariirtii uu ka kacay isku tuuray yiri, “wallaahi Barre in aan tumo aa i haysa, wajiga ayuu maanta iga fiiqay” Ciise oo sida uu isagu dareemay u fahmay in wax saas ah aysan jirin baa yiri, “Yuusuf is daji saaxiib, cabitaan qabow baan kuu soo qaadayaa, markaan soo laabtana, waxa dhacay oo dhan baad ii sheegaysaa, waan hubaa in aan xallin doonnee”. Yuusuf, markuu Ciise sheekadii u dhameeyay, uu Ciise qosol oodda jabsaday, isagoo leh, “dhibkaas waan ku ogaa Barre, waxaas agtiisa caadi ayeey ka tahay, ee is daji, Munana dharkaad xirnayd kugulama yaabeyso oo waa ogtahay in aanan bad loo labisane caadi iska dhib saaxiib”.
Ciise oo wali Yuusuf dajinaya, baa waxaa usoo galay Ugaas oo Ciise saaxiib fiican la ah, muda dheerna ay isku fasal ahaayeen. Yuusuf iyo Ugaas aqoon fog iskuma laha, oo dhowr jeer kaliya ayeey Ciise agtiisa isku arkeen.
Barre waa wiil gaaban, si qeyru masuulnimo ah u cayillan, markii la arkaba tintiisu saliid xad dhaaf ah ay ka difqayso, qof dadka markaas uu u sheekeynayo aysan garanayna inta badan xamanaya.
Markii la wada istaagay ee la rabo in badda la aado ayuu Ugaas, Yuusuf oo maqlaya yiri “Yuusuf hadduu noo raacayo badda usheeg lacag fiican hasoo qaato, aniga tabar uma hayee”. Ciise oo ceeb dartiid qosolgariiraya baa yiri “adeeroow adiga ma dadkaad wakiil katahay? arag bal markii inta wax la waayo, adiga lagu baryo”. Yuusuf oo wali Muno wixii soo dhex maray la walaacsan baa ku jawaabay, Ciisoow na keen sawirkaan bararan warkiisa ma rabee”.
Maalintaas oo dhan, intii Liido la joogay Ugaas wuxuu ku jiraa mar qof ardada iskoolka ka mid ah uu xanto iyo mar uu Ciise ama Yuusuf midkood wax ka sheego. Yuusuf oo yaaban baa mar uu Ugaas sanbuus doontay ku yiri Ciise “saaxiiboow midkaan sideed isku fahantaan waaba xodxode?”. ‘Saan baan ku wadaa” ayuu Ciise ku jawaabay, inta Yuusuf kusoo jeestayna raaciyay “saaxiiboow sifiican ii dhagayso, Muna hadalkeeda yuusan kaa maqlin maraxaan, magaalada dhan yuusan been ku faafine”. Yuusuf oo labada indhood filanwaa la kaduudaya baa Ciise ku yiri “sidee Muno warkeeda iiga maqlaa, maba sheekeysannee balaayada difqeysa”. Ciise inta yiri “saas aan kaa rabaa” buu dabaalasho bilaabay.
Yuusufna markiiba wuxuu u jeeday dhalinyaro ay isku xaafad yihiin, kuna leexday. In Ciise iyo Ugaas ay la yaabaan buu ka baqaye wuxuu aad u rabaa in uu inta dabaasha soo gabagabeeyo, inta maalinka Jimcaha uusan ka dhamaanna soo labisto, mar uun isagoo dhalaalaya Muno ay aragto.
Ciise iyo Ugaas oo dabaal kusoo daalay baa inta caramaanyada fariistay sheeko bilaabay. Ciise sidii qof waqti yar haysta, oo raba in uu arin degdeg ah ka hadlo, baa inta uu Ugaas kusoo jeestay, aadna ugu soo dhawaaday ku yiri “saaxiib qoftii Muno ahayd ha kala hadlin Yuusuf, walaalkeed bay saaxiibo yihiin, ma rabo in hadalkeenna la faafiyee”. Ugaas baa jawaaboo yiri “haka baqin taas, ee maxaad ii heysaa? Maxaa soo kordhay?”.
“Saaxiib xalay baan Muno wacay, caadi maaha! Sida ay iigu sheekeyneysay baan arkay iyadoo shan saac oo habeenimo ah. Waligeey intaas taleefan kuma soo gaarin” ayuu Ciise Timajilic oo farxad lakala badbatay Ugaas u sheegay.
“Maxaad ka wada hadleyseen intaas oo dhan?” ayuu Ugaas weydiiyay isagoo filan weeysan.
“Wax kasta ayaan ka wada hadalnay saaxiib, qofta waala furfuranyahay. Been kuuma sheegaayo xalay mar baan u hoos galiyay ma ogtahay? Waxaan ku iri “Munooy labadeenna waa inaga intaan oo dhan sheekeysanaynee, maxaa qorshe ah?, intaysan jawaabin baan hadana su’aal kale daba dhigay illeen war cad baan rabaahe, waxaan ku iri Muno ka waran hadaan labadeenna xiriir samaysanno?”
Ugaas oo jawaabtii sugi la’ baa laba jeer weydiiyay, “Maxay ku jawaabtay? Maxay ku jawaabtay? sheekada ii boobsii intuusan Yuusuf nagu imaan”.
“Saaxiib, wey qososhay, markaas bay tiri, “Ciisoow…….” Saaxiiboow intii aysan jumnaddii dhamayn baa albaabka walaalkeeda weyn, Xaseey, kan xanaaqqa badan qolka usoo galay, oo inta qeyl qeyliyay taleefankii ka dafay”.
“Hayeh, maxaa dhacay marka? maku celisay taleefanka?” ayuu Ugaas Ciise weydiiyay isagoo aad u karkabaysan.
“Saaxiib saakay aaliseydii ayeey isoo wacday” Ayuu Ciise yiri. Ugaas baa hadalkii ka dafay oo yiri “Saakay maxay ku tiri marka, boobsii warka?”
Ciise intuusan jawaabin ayaa Yuusuf halmar gadaashooda lasoo wareegay, oo labadooda midba hal jallaato u dhiibay……..
La soco Qeybta 3-aad Khamiista dambe
ICRC oo deeq Dawo ah gaarsiisay Isbitaalka Cadaado (Sawirro)
Wasaaradda A. Gudaha oo soosaartay Habraaca Doorashooyinka maamul goboleedyada